Maalinta: Meey 16, 2020
Macaamilada EFT waxaa si toos ah looga samayn karaa akoontiga PTTBank ee galay nidaamka bankiga dhexe ee EFT. Waxay la kulantay mid ka mid ah macaamiisha ugu weyn ee pttbank kaabayaasha dhaqaalaha, 5 kun oo goobo shaqo ah, ATM ku dhow 4, [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa ka soo qeybgalay Munaasabad Lagu Dhameynayey Buundada 'Bridge Bridge Completion Creemony' oo lala yeeshay kulan fiidiyow ah oo ay wehelinayaan Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Adil Karaismailoğlu. Erdogan iyo Karaismailoğlu xaflada oo ku saabsan dhameystirka mid ka mid ah dhismayaasha buundada [More ...]
Wareegtada Wasaaradda Gudaha, bandow ayaa laga hirgalin doonaa Istanbul oo dhan 16-17-18-19 Mee. Si looga hor tago muwaadiniinteenna ku qasban inay shaqeystaan ​​waajibaadkooda waajibka ah iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka inta lagu jiro xannibaadda, [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipal Akçaray tram wuxuu safray 85 kun oo kilomitir bishii la soo dhaafay, taasoo bixisa adeeg gaadiid deg deg ah, raaxo leh oo nadiif ah muwaadiniinta. Gudbinta taraammada Akçaray, taas oo astaan ​​u noqotay magaalada [More ...]
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu baarey shaqooyinka cusboonaysiinta ee ka socda Terminalka Grand Istanbul Bus, taasi oo noqotay riyo cabsi laga qabo muwaadiniinta sanadihii lasoo dhaafay. İmamoğlu wuxuu yidhi, Waan hilmaamnay Saldhigga Baska ee Istanbul, kaas oo la hilmaamay, [More ...]
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu ayaa ka yeedhay Galata Quay, oo ah halka laga bilaabayo dhaqdhaqaaqa Atatkrk ee ka socda Istanbul una tagaya Samsun oo leh Bandırma Ferry: [More ...]
Dhacdadii shineemo baabuur ee nostalgic ee degmada İzmir ee Magaalo-Weyne waxaa goob joog ka ahaa sawirro midab leh. Muwaadiniinta Izmir, kuwaas oo guryahooda uga bixi kari waayey sababo la xiriira cabbiraadda coronavirus, ayaa moraal ka helay baaritaanno filimaan isku mar ah oo lix dhibcood ah. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay farxad u keentaa May 19-ka guryaha inta lagu guda jiro maalmaha corona. Marka lagu daro munaasabado badan oo lagu daabici doono aaladaha dijitaalka ah, waxay sidoo kale abaabushaa tartan loogu magac daray Online Treasure Hunt. 7 saacadood 19 daqiiqo [More ...]
Difaaca Baykar wuxuu gaarsiiyay seddex kale oo ah Gawaarida Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn (UAVs) qeybta Duulista ee Agaasinka Guud ee Amniga. Mawduuca, Madaxweynaha Madaxtooyada Turkiga, Warshadaha Difaaca. Dr. Ismaaciil [More ...]
A Gawaarida Tiknikada ah ee Aan Nooceeda Ahayn (UAV) waxaa lagu aasaasay Taliska Guud ee Gendarmerie ee nooca loo yaqaan 'Bayraktar TB2 nooca SİHAs' ee degmada Cizre ee Şırnak. Qoraal uu soo saaray Wasiirka Arimaha Gudaha Süleyman SOYLU, [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank, waaxda badeecada cad ayaa ah mid ka mid ah wajiyada Turkiga ee cabirka, "mugga waxsoosaarka, soo-saarka, qiimaha ayuu ku daray oo wax ku biiriyaa dalkeenna iyada oo dhoofinta ay door hoggaamineed ka qaadaneyso horumarka. Ku dhowow kaamil [More ...]
Khadadka 'ALO', ee ka shaqeeya isuduwidda wada-xiriirka Lataliyaha Dadweynaha ee Saxaafadda, Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, ayaa baahi weyn u qaba habka lagula dagaallamayo nooca cusub ee coronavirus. Qoyska, Shaqaalaha iyo Adeegyada Bulshada Zehra [More ...]
Isla mar ahaantaana dalka oo dhan si loo hubiyo in go'aannada ay qaateen Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Agaasinka guud ee Amniga, Taliyaha Guud ee Gendarmerie iyo cutubyada Taliska Ilaalada Xeebaha ay ku jiraan baaxadda nooca coronavirus-ka cusub (Covid-19) la dhaqan-geliyey. [More ...]
Sida lagu sheegay bayaanka Wasaaradda Arimaha Gudaha, marka loo eego xogta saadaasha hawada, qiimeynta heerkulka hawada maalinta Axadda, 17ka Maajo, marka loo eego awaamiirta Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, xanuun daba dheeraaday oo jira 65 sano iyo wixii ka weyn. [More ...]
Iftiimin Amni Xasilooni ah oo ku saabsan Warbixinta Akadeemiyada Booliska ee Kovid-19
Warbixinta, oo ay diyaarisay Madaxtooyada Akadeemiyada Booliiska, ayaa lagu sheegay in wixii dhacay intii uu socday cudurka faafa uu muujiyey in wajiga waaxda amniga aaney ku filneyn, loona baahan yahay isfahan isku dhafan oo amniga ah oo aaggan looga baahan yahay. Faafinta Kovid-19 iyo Beyond International [More ...]
Xarunta Rize Logistics si ay u Gaadho
Kuxigeenka AK Party Rize Muhammed Avcı wuxuu cadeeyay in Rize uu si wanaagsan u siiyay Madaxweyne Erdogan warka wanaagsan ee Xarunta Saadka uu muddo dheer sugayay wuxuuna uga mahadceliyay Erdogan xarunta xarunta loojistikada ee loo keenay Rize. Xisbiga AK Party [More ...]
4-Day Barnaamij Duulimaad Khaas ah oo loogu talagalay Rakaabyada marka laga reebo IZBAN; Maalmaha 16-17-18 iyo 19 Meey, xilliga bandoowga la adeegsan doono; İZBAN waxay ku dhawaaqday inay hirgelin doonto qorshe duulimaad khaas ah oo loogu talagalay rakaabka marka laga reebo. IZBAN's twitter rasmi ah [More ...]
Dhismaha kaabayaasha iyo ballaarinta wadooyinka oo ay bilaabeen kooxaha Maamulka Gobolka Karabük ee wadada Keltepe Ski Center ayaa sii socota. Mehmet Uzun, Xoghayaha Guud ee Maamulka Gobollada Gaarka ah, Hasan, Madaxa Golaha Guud ee Gobollada [More ...]
Khadadka tareenka ee Samsun-Sivas Kalın, oo ay casriyeeysay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha oo ay ugu talagashay qaadista 3 milyan oo tan oo xamuul ah sanad walba, ayaa dhiirogelin cusub siin doonta gadiidka saadka ee wadada isku xirta waqooyiga-koonfur. Turkiga [More ...]
Duqa magaalada Niğde Emrah Özdemir ayaa dardar geliyay shaqooyinka lagu xaqiijinayo mashaariicaha ku jira buugga mashruuca inta lagu gudajiray doorashada murashaxiinta si loo yareeyo socodka gaadiidka ee bartamaha magaalada. Ka gudub qeybaha xanibaya qulqulka taraafikada [More ...]
Isku duwaha maxalliga ah ee Dawooyinka loo Adeegsaday Daaweynta'vidvid-19 'ayaa la dhammaystiri doonaa bisha Juun
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa sheegay in isku-duwaha maxalliga ah ee daroogada loo adeegsado daaweynta nooca cusub ee coronavirus (Covid-19) la dhammeyn doono bisha Juun. 17 TAAGEERADA MADAXWEYNE FARANKA Varank wuxuu ka qeybqaatay barnaamijka 'Covid-19' barnaamijka uu kaga qeybgalay kanaalka TRT News channel. [More ...]
70 kun TL Taageero ah oo loogu talagalay SMEs Ka helitaanka Tababbarka Wershadda Model
KOSGEB waxay taageeri doontaa ilaa 70 kun TL oo loo yaqaan 'SMEs' oo tababar ka heli doona Warshadda Model. Ku dhawaaqida qaanuunka, Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyada Mustafa Varank ayaa mar kale ku nuuxnuuxsaday ahmiyada isbedelka dijitaalka ah muddadii aafada. [More ...]
Wershadaha Gawaarida iyo Ganacsiga ee Turkiga Inc. Warbixinta EIA ee mashruuca soo saarista Korantada Gawaarida ee la qorsheeyay inay dhisto shirkadu waa loo furay si loo arko. Oggolaanshaha Qiimeynta Deegaanka iyo Kormeerka [More ...]
Waa shirkad tareenka ka shaqeysa oo ka shaqeysa Cyprus intii u dhaxeysay 1905-1951 kuna hoos jirtay magaca Shirkadda Tareenka Dawladda ee Cyprus. Wuxuu ka shaqeeyey khadka khadka u dhexeeya tuulada Evrihu ee Lefke iyo magaalada Famagusta. Sanado firfircoon [More ...]
Magaalada Bulgaria ee Kardzhali magaalada Rusalsko Light oo ku taal tuulada Cali Durmaz wuxuu ku dhashay 1935, waxay ku timid Turkiga sanadkii 1950, waxay ka tagtay waxkastoo Bulgaria ah, waxayna bilaabeen inay ku noolaadaan Bursa Mudanya. Ganacsi noloshiisa oo dhan [More ...]